ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ) ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြား နေသောကျောင်းသား/သူများ(၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်)အားလုံး ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး(တစ်လ ၃၀၀၀၀/-ကျပ်ဖြင့် ၁၀ လ) (၁၅.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ အထိနောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာ ပုံစံအားကျောင်းသားရေးရာဌာတွွင် အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ တက္ကသိုလ်ပညာကို သင်ကြားရန်အချက်အခဲရှိသူ၊ အခက်အခဲရှိသောအခြေအနေချင်းတူလျှင် ပညာတော်သူကိုဦးစားပေးပါမည်။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များမှာ- ၁။ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ မိသားစုဓါတ်ပုံနှင့်နေအိမ် ၂။မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ ၃။ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသော အခြားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ၄။ မိမိကိုယ်တိုင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြချက်(ကိုယ်တိုင်လက်ရေးဖြင့်) ၅။ ကျောင်းစာပြင်ပလှုပ်ရှားမှုနှင့် အောင်မြင်မှုများ(အထောက်အထားမိတ္တူ) ၆။ ဘဝရည်မှန်းချက်(ကိုယ်တိုင်လက်ရေးဖြ င့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၉-၄၂၁ ၂၂၄ ၂၉၉ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာများအား လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ကားဂိတ်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် (၂၁.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့အရောက် ပေးပို့ရပါမည်။ ပေးပို့ရန်လိပ်စာ-…
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် “မြန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၀” တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းပေးရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ချီးမြှင့်မည့်ဆုများ 1. Technopreneurship 2020 Accelerate Award (10,000,000 MMK, Company Registration & Workspace for6Months) 2. Technopreneurship 2020 Startup Award (8,000,000 MMK, Company Registration & Workspace for6Months) 3. Technopreneurship…
(၇၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အကြို ကျောင်းတွင်း Product Show ပြိုင်ပွဲအား (၅.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုသော ကျောင်းသား/သူများသည် ကျောင်းသားရေးရာဌာတွင် (၁၇.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည် Junior Level – Second Year(CS) – Second Year (CT) Senior Level (Computer Science) – Fifth Year (CS) – Fourth Year(CS) – Third Year (CS) Senior Level( Computer Technology) – Fourth Year(CT) – Third Year (CT) ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။